Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in gargaar bani'aadamnimo uu ka socdo gobolka Tigray – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in gargaar bani’aadamnimo uu ka socdo gobolka Tigray
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in gargaar bani’aadamnimo uu ka socdo gobolka Tigray
Dowladda Itoobiya ayaa Isniintii sheegtay in gargaar bani’aadamnimo loo fidinayo sidii loogu talo galay gobolka colaadda ku habsatay ee Itoobiya ee waqooyiga gobolka Tigray.
Hadalkaan ayaa waxaa yiri Demeke Mekonnen, kuxigeenka raiisul wasaaraha Itoobiya ahna wasiirka arimaha dibada, isaga oo warbixin ka siinaya jaaliyadaha diblomaasiyadeed iyo kooxda deeq bixiyaasha ee Human and Resilience donor xaalada bini’aadanimo ee hada kajirta Tigray.
Dagaal toddobaadyo socday oo woqooyiga Itoobiya ka dhacayey gobolka Tigrey ee u dhexeeyey Jabhadda Xoreynta Dadka ee Tigreega (TPLF), oo xukumi jirtay gobolka illaa laga adkaado, iyo Ciidamada Difaaca ee Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen boqolaal qof, kumannaanna ay ku barakaceen, iyo malaayiin degdeg ugu baahan gargaarka bani’aadamnimada.
In ka badan 53,000 oo qaxooti ah ayaa ka qaxay Tigray una galay bariga Sudan lixdii toddobaad ee la soo dhaafay, sida ay sheegtay hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay.
Mekonnen wuxuu u sheegay bulshada diblomaasiyadeed in “cunno, badeecooyin, iyo agab caafimaad ay ka socdaan gobolka si wax looga qabto baahiyaha ka-faa’iideystayaasha.”
Bishii Diseembar 22keedii, Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay iyo 30 wada-hawlgalayaasha bani’aadamnimada ah ayaa codsaday 156 milyan oo doolarka Mareykanka ah si wax looga qabto “baahiyaha bani’aadamnimo ee halista ah” ee qaxootiga Itoobiyaanka ah ee ka soo cararaya colaadda Tigray illaa iyo nuskii hore ee 2021.
Codsiga dhaqaalah ee degdega ah ayaa sidoo kale la filayaa inuu xoojiyo u diyaar garowga qaabilaada qaxootiga ee wadamada kale ee gobolka hadii ay dhacdo dhaqdhaqaaqyo qaxooti oo dheeri ah, ayay sheegtay hay’ada qaxootiga ee UN.
Isagoo dib u xasuusanaya “burburkii weynaa” ee ay u gaysteen kaabayaasha dhaqaalaha ee dagaalyahanada TPLF, Mekonnen wuxuu kaloo carabka ku adkeeyay “hawsha aadka u culus” ee dib u dhiska ee hada socota iyadoo khadadka isgaarsiinta dib loogu soo celiyey ku dhowaad dhammaan qaybaha gobolka iyo hay’adaha maaliyadeed oo dib u bilaabay howlahoodii.
Dowlada Itoobiya ayaa maamul kumeel gaar ah u xilsaartay inay maamusho gobolka kadib jabkii TPLF.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, isfaham guud ayaa laga gaadhay in la sii wado la macaamilka kooxda deeq-bixiyeyaasha si looga shaqeeyo sidii loo sii ballaarin lahaa howlaha samafalka ee gobolka.
Previous articleFaa’iidada Midhaha Romanka, Liinta Iyo Tufaaxa!
Next articleWeedhaha Wanaagsan Iyo Ganacsiga!
Dagaal u dhaxeeya Ayax iyo Beeraleyda Hirshabeelle